स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी – Online Nepal
April 25, 2020 429
काठमाडौँ, १३ वैशाख । कोभिड–१९ को महामारी विश्वमा कायम रहेसम्म नेपालले लकडाउन सहज बनाए पनि पहिलेजस्तै ‘पूर्ण स्वतन्त्र’ रूपमा काम गर्ने स्थिति नरहने विज्ञहरूले बताएका छन् । लामो समयसम्म लकडाउन जान नसक्ने अवस्थामा कोभिड–१९ संक्रमण रोकेर कसरी सुरक्षित रूपमा दैनिक काम गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । त्यसको उपायको खोजी गर्न थालिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहेनोम घेबरेयेससले समेत भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा ‘लकडाउन’ वा नियन्त्रण हटाउनुको अर्थ कुनै पनि देशमा महामारीको अन्त्य नभई यो दोस्रो चरणको सुरुवात मात्र रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘दोस्रो चरणमा मुलुकहरूले आफ्नो नागरिकसँग कुराकानी गरेर उनीहरूलाई शिक्षित र सशक्त बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा यो समस्या (भाइरसको संक्रमण) पुन: तीव्र गतिले उदय हुँदा जवाफी कारबाही गर्न सकियोस् ।’ याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
Prevकसैलाई राहत आबस्यक परे सम्पर्क गर्न करिश्माको अनुरोध १ सेयर गर्नुहोस
Nextअलबिदा – सुनिल ! सदाको लागि हामी सबैलाई छोडेर गए